Sony Xperia 10 na Xperia 10 Plus: Nkọwapụta, Ahịa na Ntọhapụ | Gam akporosis
Sony bụ otu n'ime ụdị atụ anya nke a na MWC 2019, kemgbe ha kwere nkwa ịhapụ anyị usoro akụkọ dị mkpa. Izu ụka a bịara na asịrị na ụlọ ọrụ ahụ ga-ewebata mgbanwe aha na ekwentị ya, mgbe ọ nwụsịrị n'akụkụ a. Mgbanwe aha nke mechara mezuo. Ebe ọ bụ na ha na-ahapụ anyị a ọhụrụ nso nke smartphones. Modelsdị ndị mbụ sitere na etiti ya: Sony Xperia 10 na Xperia 10 Plus
Ndị a Sony Xperia 10 na Xperia 10 Plus bụ ngwaọrụ ndị na-agbaso usoro na-aga n'ihu, na akụkụ, nke ika ahụ. Ọ bụ ezie na ha pụtara ìhè karịsịa maka nzọ ya na nnukwu ihuenyo, nke nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke n'ihu ngwaọrụ ahụ. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ama ama Sony a?
Ebe ọ bụ na ihe nlereanya a, ụlọ ọrụ ahụ hapụrụ 18: 9 ma ọ bụ 19: 9 dị oke mma na ahịa. Ha agafeela n'ihu na usoro nke iji n'ihu wee hapụ anyị smartphone nke rutere na nha 21: 9. Ihuenyo na-enweghị ngwụcha, nke na-ekwe nkwa ahụmịhe onye ọrụ na-emikpu onwe ya oge niile.
Mgbe ah Anyị na-ekwu maka ekwentị ọ bụla dị iche iche iche iche. Ka i wee hu ihe di iche na ha.
1 Nkọwa Sony Xperia 10
2 Nkọwa Sony Xperia 10 Plus
Nkọwa Sony Xperia 10
Na ọkwa teknụzụ, anyị na-eche ihu ụdị etiti. Ọ na-agbaso nke ọma na nkọwa, ọ bụ ezie na e nwere akụkụ abụọ nke akara ahụ nwere ike imehie, dịka batrị ya, nke yiri ka ọ dị ụkọ. Mana nke a bụ ihe enwere ike ịhụ na iji ngwaọrụ. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke Sony Xperia 10
Nka na ụzụ nkọwa Sony Xperia 10
Nlereanya Xperia 10
Ihuenyo 6-anụ ọhịa LCD na Full HD + mkpebi na 21: 9 ruru
Nhazi Snapdragon 630
Igwefoto na-aga n'ihu 13 + 5 MP
Igwe n'ihu 8 MP
Njikọ Bluetooth 5.0 3CA LTE CAT12 / 13 WiFi 802.11 ac GPS GLONASS
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka agụ NFC n'akụkụ
Batrị 2.870 mAh na ngwa ngwa
Akụkụ 156 x 68 x 8.4 mm
Obi abụọ adịghị ya, ihuenyo bụ mmewere na-adọta uche kachasị na ama a. Dị ahụ ahọrọla iji belata okpokolo agba ya, karịsịa n'akụkụ ya. Yabụ nke a Sony Xperia 10 dịlarị nso na echiche nke ihuenyo niile. Na mgbakwunye, na-atọ ọtụtụ mmadụ ụtọ, ọ nweghị ọkwa ma ọ bụ oghere dị na ihuenyo ahụ.
Dị ka ihe nhazi ha hapụrụ anyị Snapdragon 630, nke bu oke nhọrọ n’ime etiti. Karịrị ike na ịrụ ọrụ nke ọma karịa onye bu ya ụzọ, Snapdragon 625. Ọ bụ ezie na batrị anyị hụrụ na ngwaọrụ ahụ, 2.870 mAh nwere ike ọ gaghị ezu. Karịsịa ma ọ bụrụ na anyị echee na ọ bụ ekwentị dị n'etiti. Ọ bụ ezie na Sony na-achọkarị iji batrị ndị a eme ihe, anyị ga-ahụ otu o si arụ ọrụ.
Banyere igwefoto, anyị na-aga n'ihu ịhụ ihe anyị hụrụ n'etiti etiti. Sony Xperia 10 gbara na igwefoto azụ abụọ, mgbe anyị nọ n'ihu anyị nwere otu anya. Na mgbakwunye, ekwentị abanyelarịrị na gam akporo achịcha dịka sistemụ arụmọrụ.
Nkọwa Sony Xperia 10 Plus
Na ebe nke abụọ anyị ga-ahụ ama ama ọzọ. Dị ka aha ya na-eme ka anyị maa maa, nke a Sony Xperia 10 Plus bụ ụdịtụ ọfụma karịa nke gara aga. Ọ nwere ihuenyo dịtụ ntakịrị, na-ejigide 21: 9 ruru, nhazi kacha mma ma nwee ike karịa n'ozuzu. Ma ọ na-anọ n'ime etiti. Ndị a bụ nkọwa ya:
Nka na ụzụ nkọwa Sony Xperia 10 Plus
Nlereanya Xperia 10 gbakwunyere
Ihuenyo 6.5-anụ ọhịa LCD na Full HD + mkpebi na 21: 9 ruru
Nchekwa n'ime 64GB (gbasaa ruo 512GB)
Igwefoto na-aga n'ihu 12 + 8 MP
Igwe n'ihu 8 MP nwere oghere f / 1.4
Akụkụ X x 167 73 8.3 mm
Sony emeela atụmatụ ọhụrụ nke ekwentị ya na aha Ultimate Wide. Ọ bụ ihuenyo dị ogologo karịa ihe anyị na-ahụ na ụdị ndị ọzọ taa. Nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị, n'ihi na ọ na-akwado obosara nke ụdị ndị ọzọ, ọbụlagodi, ma jiri ihuenyo dị ogologo. Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ etu o si arụ ọrụ mgbe ọ na-eri ọdịnaya ma ọ bụ jiri ngwa na ngwaọrụ.
Maka ndị ọzọ, anyị nwere ike ịhụ na Sony Xperia 10 Plus a dịtụ obere karịa ike karịa nke gara aga. N'okwu a, a na-eji ihe nhazi Snapdragon 636, nke dị mma karịa nke gara aga. Na mgbakwunye, ọ na-abịa na nnukwu ikike nke RAM n'ime, nke ga-ekwe ka ị rụọ ọrụ mmiri karịa oge niile. Maka batrị, ụlọ ọrụ ejirila 3.000 mAh mee ihe na nke a, jikwa ụgwọ ngwa ngwa. Enwere nchekwa 64GB na microSD.
Dị ka nke ọzọ, anyị na-ahụ akara mkpisiaka ahụ n'akụkụ na Sony Xperia 10 Plus a. Ọ na-abịa na gam akporo achịcha, dị ka ekwenye na ngosi ya. Banyere igwefoto, ha na-akụ nzọ na okpukpu abụọ na azụ na otu ihe mmetụta n'ihu ngwaọrụ ahụ. Ihe anyị na-ahụ ugboro ugboro n'etiti etiti.
Maka Sony Xperia 10, anyị nwere ike ịhụ na ọ ga-abụ naanị otu ụdị ekwentị maka ọrịre. Ekwenyela na a ga-ebupụta ya na ahịa na March, na agba ojii, ọla ọcha, acha anụnụ anụnụ na agba pink. Ọ bụ ezie na n'oge a anyị enweghị ọnụahịa maka ngwaọrụ ahụ. Anyị na-atụ anya izute gị n'oge na-adịghị anya.
Dị ka ọ dị na mbụ, anyị enweghị ọtụtụ data n'oge a banyere mwepụta nke Sony Xperia 10 Plus. Dị ahụ enyebeghị anyị ụbọchị, ọ bụ ezie na a na-atụ anya na ọ ga-eme na Machị. N'okwu gị, ị ga-enwe ike ịzụta ekwentị na oji, ọla ọcha, acha anụnụ anụnụ na ọla edo. Anyị amaghịkwa ihe ọ bụla banyere ego ọ ga-akwụ. Yabụ na anyị nwere olile anya ịmatakwu nkọwapụta n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » Sony Xperia 10 na Xperia 10 Plus: Sony dị n'etiti etiti (Video)